About the Quality Control - Dongguan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Raha toa ka misy ny fangatahana fanaovana fitiliana ho an'ny mombamomba ny aluminium, azafady manoro hevitra antsika Izy ary manaova fotoana mba hangataka ny antoko fahatelo fahefana mba hitsapana ny vokatra.
Raha ny marina, dia an-tsambo ny santionany voalohany ho anao mba hahazo antoka ny aluminium toetra, dia hanomboka amin'ny manaraka manome fitoerana hiresaka aminao. Fa ny famokarana faobe, ny sampan-draharaha QC dia nandinika tsirairay vokatra tsara sy hiverina ho any amin'ny fonosana ho an'ny sampan-draharahan'ny fanaraha-maso indray. Koa raha mahita olana noho ny vokatra, Aza misalasala hifandray antsika Izy ary hamantatra ny tsara indrindra hiatrehana ireo. Misaotra noho ny fanohanana!